Oromo Free Speech: (bilisummaa) — The newly mint Oromo political organization named the Oromo Democratic Front has become the talking point for so many over the last four or five months.
(bilisummaa) — The newly mint Oromo political organization named the Oromo Democratic Front has become the talking point for so many over the last four or five months.
September 18, 2013 (bilisummaa) — The newly mint Oromo political organization named the Oromo Democratic Front has become the talking point for so many over the last four or five months. Among the media outlets that had been scrambling to air what the ODF is up to, the social media and the gossip rooms ranked first followed by the Ethiopian satellite TV (ESAT)while the dust seems to settle after the first wave of all the mixed emotions about this infant politico.
Posted by Oromo firee speech at 6:22 PM